हृदयाघातको जोखिम महिलामा बढी, के छ कारण ? – Health Post Nepal
हृदयाघातको जोखिम महिलामा बढी, के छ कारण ?
२०७५ पुष २० गते १७:४१
तपाईंलाई हृदयाघातको जोखिम बढी हुने गर्छ, यदि तपाईंको जीवनशैली अस्वस्थकर छ वा निष्क्रिय छ भने । तर, यहाँ केही यस्ता तथ्य छन्, जसले तपाईंमा हृदयाघातको जोखिम बढाउन सक्छन्, विशेषतः तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने ।
अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनमा केही सीमितता पनि महसुस गरेका छन् । जस्तै, धेरै सहभागी श्वेत तथा उच्च सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका थिए । भविष्यको अनुसन्धानका लागि उनीहरूले विविध पृष्ठभूमिका मानिस, विविध उमेर समूहका र विविध सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका मानिसको सहभागिता हुने आशा गरेका छन् ।
मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएन : नर्भिक अस्पताल